​दरिद्र बौद्धिकताले प्रधानमन्त्रीलाई खाँदैछ
Tuesday, 19 Jul, 2016 11:10 AM
मुलकको समग्र विकासका लागि राजनैतिक दलहरु विचमा कम्तिमा केहि साझा मुद्धाहरुमा एकमत हुनुपर्ने हो । अल्पविकसित र अविकसित देशहरुको ठुलो समस्या भनेको दलिय अह्मता नै हो । त्यस दलिय अहमतामा छिमेकी तथा प्रभावाशाली राष्ट्रहरुले आफु अनुकुलको दलको र व्यक्तिलाई प्रयोग गरी उक्त राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न गरिरहेका हुन्छन ।
नेपालको राजनैतिक परिवर्तनका महत्वपूर्ण विषयहरुमा कहिले भारत त कहिले चिन कार्ड किन प्रयोग हुन्छन । किन राजदुतहरुका नाममा ठुलै चलखेल हुन्छ । रातो झण्डा बोकेकाहरु उत्तर तर्फ अनी हरियो झण्डा बोकेकाहरु दक्षिणतर्फ लागेको पाइन्छ । नागरीकहरु अन्यौलमा हुन्छन तर नेताहरु कहिल्यै अन्यौलमा छैनन । दलिय भागबण्डा देखी प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री देखी परराष्ट्रमन्त्री सम्मका लागि उत्तर र दक्षिणधुर्व तर्फ लागेकै देखिन्छ ।
सचेत नागरीकले बुझनुपर्ने विषय के हो भने दलका नेताहरु दलिय झण्डा बोकेर आफुअनुकुल समयमा दक्षिण वा उत्तर गरिरहेका हुन्छन । कहिले ओली त कहिले प्रचण्ड कहिले माधव त कहिले शेरबहादुर ओरहदोहर चलिरहेकै छ । हामीले कहिल्यै नेताहरुलाई नेपालको झण्डा बोक्न भनेकै छैनौ । काँग्रेस हुँदा रुख ठिक एमाले हुँदा सुर्य ठिक माओवादी हुँदा हसिया हथौडा ठिक अनि गाई पनि ठिक हलो पनि ठिक हुन्छन । जब आफ्नो पालो र्घकन्छ तब नेपालको झण्डा बोक्ने बानी परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली अहिले सोहि मार्गमा छन । उनका सल्लाहकार पनि उनलाई उक्साईरहेका छन । सहमतिय पद्धतिमा चलेको राजनैतिक पद्धतिलाई उनले आफु अनुकुल व्याख्या गरेर आफैलाई सुपरियर बनाउने गलत प्रयास समेत गरिरहेका छन ।
तिन ठुला दलहरु आलोपालो सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन । संक्रमणकालिन व्यवस्थाको फाईदा एमालेले पाएको छ । छोटो समयमा आफ्नो पार्टीको तिनजना व्यक्तिहरुले प्रधानमन्त्री चलाईसकेका छन । यो उपलब्धीलाई एमालेले नजरअन्दाज गर्न मिल्ला ?
माओवादीका दुई नेताहरु प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन यसलाई माओवादीले नै नजरअन्दाज गर्न मिल्ला ? देशको ठुलो दल जसका एक नेताले एक पटक प्रधानमन्त्री लिएका छन । यो व्यवस्थामा संक्रमणकालका जटिलमुद्धाहरु देखी संविधान जारी गर्ने समेतको बागडोर सम्हालेको नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वलाई राष्ट्रविरोधी भन्ने के.पी ओलीले काँहाको पानी खाएका हुन । उनका राजैतिक सल्लाहकार काँहाबाट तलब भत्ता लिन्छन के विषयका लागि सल्लाकार हुन । बौद्धिकताको कुन स्तरमा रहेका छन । राजनैतिक जोड घटाउका माहिर खेलाडी प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेसलाई लगाउदै आएको आरोप साँचो होला ? यो आरोप लगाएर उनि के निधाउन सकेका होलान यस को जवाफ ओलीले नै दिनैपर्छ ।
माओवादी केन्द«का अध्यक्ष प्रचण्डलाई विहान राष्ट्रवादी , बेलुकी राष्ट्रघातीका रुपमा परिचित गराउने अधिकार केपी ओलीलाई कसले दियौ ? उनै प्रचण्डका प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई के राष्ट्रघातीहरुको नेता भनेर चिन्ने हो ? यस विषयलाई उनका सहयोगी र उनको दलले मान्नसक्छ । यसले हामीलाई कस्तो राजनैतिक संस्कारमा पु¥याउछ । आम जनताको दैनिकी असहज छ । नाकबन्दी र भुकम्पले आहत बनाएको छ । नक्कली डाक्टर देखी प्रहरी सम्म इन्जिनियर देखी पत्रकार सम्म मानवअधिकारवादी देखी एनजिओ आइएनजियो सम्म( अपवदा बाहेक) दलको संरक्षणमा मनपरी गरिरहेका छन । कुटनैनिक सम्बन्ध दिनानु दिन कमजोर बन्दैछ । न्यायपालिकामा संगठित र क्रियाशिल सदस्यहरुको विच पाउठेजोरी चलिरहेको छ । यस विषयमा ध्यान नदिने राजनैतिक दलका नेताहरु प्रजातन्त्रवादी हुन ? राष्ट्रवादी हुन ? लोकतन्त्रवादी हुन ? चोरी औंला त उनिहरु तिर तेर्सिन्छ ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीले सुरुवात गरेका केहि विषयहरु निकै जायज छन । उनका सपनाहरु पनि कति जायज छन । ति विषयहरुलाई नयाँ सरकारले स्थान दिनुपर्ने विषयमा पो सडक र सदनको प्रस्तुती जायज हुन्थ्यो होला । प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरु त्यहाँ चुके । उनले चरित्र बौद्धिकताको भन्दा पनि दरिद« बौद्धिकताहरुको सल्लाह लिए । एक दिन अघि प्रधानमन्त्रीले भनिदिए देशमा एमाले पनि छ । संसदमा एमालेमा पनि छ भनेर देखाइदिनुहोस भोलीपल्ट स्वतन्त्र युवाका नामामा आफ्ना भातृ संगठनका नेताहरुलाई सडकमा ल्याइदिए यो कस्तो नौटङ्गकीको पात्र बन्न पुगे प्रधानमन्त्री ओली । जुन जगमा एमालेको सरकार बन्यो । जुन डिविसले उसका पिलरहरु उठे । आज त्यहि जगमा विदेशी गन्ध आयो भन्नु कति नैतिक विषय हो ।
नेपाली राजनैतिक यात्रमा सदैव काँग्रसलाई गाली गरेर अघि बढ्ने एमालेका सहयात्रीहरुले अब आफ्नो नितिलाई तत्काल परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । काँग्रेसका केहि कमजोरीहरु छन । पात्रहरु ढुलमुले पनि छन । यो विषयलाई स्विकार काँग्रसले पनि स्विकार गर्नु पर्दछ । ओली जस्ता नेताले इतिहासका पानाहरु पढेका छन । राजनैतिक धरातल बुझेका छन । सबै बुझेर पनि बुझ पचाउने दरिद« बौद्धिकता ओलीको हुदै होइन । शक्ति र सत्तामा मस्त उनका सहयोगीले उनको कदलाई अन्यासै कमजोर बनाइदिएका छन । केपी ओलीले के गरे ? जम्माजम्मी उत्तर नाकबन्दीको समयमा भारतलाई नेपाललाई नहेप्न भने , अरु के गरे ? तै चुप मै चुप । यसको आडमा उनले i am with kp oli टिर्सट अंकित गरे विचारा i am with nepali भन्न सकेनन् ।
माओवादी र काँग्रेस गठबन्धनमा शंका भए । गठबधन्ले देश डुबाउने भए । देश र जनताको पक्षमा सदैव एमाले छ भन्ने सन्देशलाई पुष्टि गर्ने भए एमाले अब बन्ने सरकारमा किन नजाने ? किन सर्वदलिय सरकार नबाउने ? किन मधेसको मुद्धा सम्बोधन नगर्ने ? जब अन्त्यमा दलकै जुङ्गाको लडाई हो भने तिमिलाई कसैको गठबन्धनलाई अराष्ट्रिय भन्ने अधिकार छैन । त्यो अधिकार न हिजो कसैलाई थियो ।
प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको पगरी भिरेर देश र जनताको लागि कार्य गर्छु भन्नेहरु संविधानको धर्म समातेर धार्मिक बन्छु भन्ने कमल थापा र चित्र बहादुर के.सी हरुका २ वर्ष सम्म जनताको आशुँ पुच्छन नसक्ने गठबन्धन सरकार राष्ट्रवादी भयो । संविधानलाई टेकेर पद लिने संविधान कुल्चियर नेता बन्नेहरुले आफ्नो सत्ता जानलागेपछि रुवाबासी गर्नुपनि स्वाभिक नै हो । यो किमार्थ राम्रो विषय हैन । लोकतन्त्रको सबैभन्दा बलियो पक्ष भनेको अनुशासन हो । नैतिकता हो । लोकतन्त्रमा जब यी दुबै विषयहरु गौण हुन्छन तब यहाँ तर्क विर्तक गर्नेहरुलाई भन्दा हेर्नेहरुलाई लाज भनेझै हुन्छ ।
अतः समृद्ध नेपाल निर्माण संविधान कार्यान्यवन , स्थानिय निकाएको निर्वाचन , प्रभावित नागरीकहरुका जनसरोकारका समस्याहरुलाई समाधान गर्न राजनैतिक सहमति र एकता अत्यावश्यक रहन्छ । न कि एमाले माओवादी न कि काँग्रेस माओवादी । सम्भव छ यदि भने नैतिक धरतालका आधारमा सर्वदलिय सरकार गठन । सम्भव छैन भने गुण दोषका आधारमा बहुमतीय सरकार गठन गर्नुनै पर्दछ । यसै विषयलाई देशको एक जिम्मेवार दलका नेता र प्रधानमन्त्रीले ज्याद«ो बनिरहनु दरिद« बौद्धिकता हो । कमजोर मानसिकता हो । म प्रधानमन्त्रीको गुण र दोषलाई सम्मान गर्नै नागरिक भएकाले उनको स्तर कमजोर भएको नेपालको प्रधानमन्त्रीको गरिमा नझुकाउन आग्रह समेत गर्दछु ।